लालभितिलाई मंगलबारे शुक्रबारे कपको उपाधी – Khel Dainik
लालभितिलाई मंगलबारे शुक्रबारे कपको उपाधी
माघ १०, २०७७ | (PostaComment)
पथरी (खेलदैनिक) । मोरङको पथरीशनिश्चरे वडा नं ८ मा सम्पन्न मंगलबारे शुक्रबारे खुल्ला नकआउट फुटवल प्रतियोगिताको उपाधी लालभिति फुटवल क्लव बेलवारीले जितेको छ । शनिवार भएको निकै प्रतिस्पर्धात्मक फाइनल खेलमा लालभित्तिले आयोजक मंगलबारे शुक्रबारे एफसीलाई २–१ ले हराउँदै उपाधि उचाल्न सफल भएको हो ।
लालभितिको जितमा एमोस मगर निर्णायक रहे । मगरले लालभितिका लागि ५५ र ६१औं मिनटमा गरेको दुई गोल नै टोलीलाई विजेता बनाउन प्रर्याप्त बन्यो । उता पराजित आयोजकका लागि ६३औं मिनटमा सौरभ कार्कीले एक गोल गर्दै खेलमा फर्कने प्रयास गरे तापनि आयोजकको त्यो प्रयास सफल भएन ।
फाइनल खेलको म्यान अफ द म्याच लालभितिका एमोस मगर नै घोषित भए । त्यस्तै व्यक्तिगत विधातर्फ सर्वाधिक गोलकर्ता र उत्कृष्ट फरवार्डको पुरस्कार आदर्श लिम्बुले जिते । उत्कृष्ट डिफेन्डर आविश्कार क्षेत्री घोषित भए भने उदियमान खेलाडी सौरव राउत बने । त्यसैगरी उत्कृष्ट गोलरक्षक दिपहाङ लिम्बु घोषित भए भने उत्कृष्ट मिडफिल्डर साइमन लिम्बु चुनिए । प्रतियोगिता कै सर्वोत्कृष्ट खेलाडी भने तिर्थ बस्नेत बने ।
प्रतियोगिताको विजेता बन्दै लालभित्ति फुटवल क्लवले नगद ५१ हजार ट्रफि, मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्यो भने उपविजेता बनेको आयोजक मंगलवारे शुक्रबारे फुटवल क्लवले नगद २५ हजारमा चित्त बुझायो । विजेता र उपविजेता टोलीलाई पथरीशनिश्चरे वडा नं ८ का वडाध्यक्ष बाबुराम दाहालले पुरस्कार हस्तान्तरण गरेका थिए ।
मंगलबारे शुक्रबारे फुटबल क्लब, पथरी शनिश्चरे–८ मोरङको आयोजनामा माघ ३ गतेदेखि शुरु प्रतियोगितामा कुल आठ टोलीहरुले सहभागिता जनाएका थिए ।
← सितल युवा क्लब सेमिफाइनलमा बिराटनगरलाई स्तब्ध पार्दै डिएफसी सेमिफाइनलमा →
आहा! रारा गोल्डकप दर्शकले रंगशाला मै गएर हेर्न पाउने माघ १०, २०७७
कस्तो छ नेपालसँग भिड्ने मौरिसियन टिम ? माघ १०, २०७७
नेपाल आइपुग्यो मौरिससको फुटबल टोली माघ १०, २०७७
मच्छिन्द्र आहा! रारा गोल्डकपको सेमिफाइनलमा माघ १०, २०७७
राष्ट्रिय महिला फुटबल लिग स्थगित माघ १०, २०७७
दावेदार मनाङ सेमिफाइनलमा माघ १०, २०७७